IDowlat Villas Palace ILifa leMveli, igumbi eliSuite-2
IDowlat Villas Palace iLifa leMveli yindawo yokuhlala yabucala kaMaharaj Narendra Singhji wase-Idar.
Eli bhotwe linamagumbi okulala ali-11, iiHolo zeSidlo, amagumbi okutyela, iHolo yeNgqungquthela, iHolo yeNgqungquthela, iLawn eSprawling elungele umtshato kunye neMisebenzi yoShishino.
Ibhotwe likwanehektare yegadi yeMango eneentlobo ngeentlobo zeMango ze-Idar Ratan ezenzelwe ngokukodwa uH.H.Maharaja Himmat Singhji. Ngokuthanda iimoto uMaharaj Narendra Signhji unemyuziyam yeemoto zakudala kunye nezakudala ezihlala iimoto, iikhareji, izikhephe ezinemoto.
Ibhotwe elakhiwe kwiBritish Colonial kunye neRajput Architecture ibonelela ngamagumbi ane-air-conditioning kakuhle kunye nefenitshala yeVictorian kunye ne-art deco. Le ndawo ineVerandas ezinkulu ezivulekileyo ezineFanitshala yentsimbi eBolileyo ukuze undwendwe luhlale luphumle kwiindawo ezivulekileyo kwaye ipropati ingqongwe ngamabala aluhlaza kunye neMango Orchard.
Idolophu yaseHimmatnagar imi kumantla eGujarat. Iindawo zokundwendwela ezingqonge i-Himmatnagar ziiMbali ze-Idar Hills ezineetempile ze-12 kunye ne-13 yenkulungwane kunye ne-Fort. Sinenkulungwane ye-10 yeetempile zaseRoda ekukholelwa ukuba zakhiwe ngexesha le-Solanki. Imbali ye-Himmatnagar yakudala kunye nedolophu yase-Idar ibuyele kumaxesha eMahabharat.
Undwendwe luya kukhathalelwa nguKarni Singh osoloko ekhona kwipropati.